Caruur hooyadood laga qaatay oo Qoys Soomaali ah lagu wareejiyey - NorSom News
Caruur hooyadood laga qaatay oo Qoys Soomaali ah lagu wareejiyey
Lix caruur soomaaliyeed oo agoon ah ayaa bishii February magaalada Grand Forks ee gobolka Minnesota looga qaatay hooyadood. Waxaana arintaas aad uga kacay, shaqo badana ka qabtay jaaliyada soomaaliyeed ee magaalada ilmaha lagu qaatay iyo guud ahaan kuwo gobolka Minnesota.
5 kamid ah lixdii caruur aheyd ee la qaatay ayaa ugu dangeyn lagu guuleystay in korintooda lagu wareejiyo aabe soomaali ah oo lagu magacaabo Ahmed Adan Cirday oo adeer u ah hooyo Nimco Khalif oo ah hooyada dhashay ilmaha , waxaase gacanta dowlada wali kusii jira hal cunug.
Waxaa dhanka kale wali socda dacwadda ka dhanka ah Nimco Khalif oo hooyada dhashay caruurta ee laga qaatay. Inta ay socoto dacwadaan ayaa haddaba waxay soomaalida deegaankaas oo aad isku abaabushay ay guuleysteen inay dowlada ka dhaadhiciyaan in ilmahaas lagu sii wareejiyay Axmed Cirday oo kamid ah qaraabada dhow ee qoyska, kana mid ahaa dadkii aad ugu dadaalay kiiska hooyada ilmaha laga qaatay.
Axmed Adan Cirday oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dadaal dheer oo ay galeen kadib, ay tani u tahay guul , waxayna filaynaa inaan ku sii dadaalno in ay qoyskaan iskula midoobaan sidii caadiga ahayd oo ay u ugu wada noolaan jireen.
Waxaan ku dadaalaynaa inaan nidaamka dalkaan anagoo ilaalinayna inaan wadada saxda ah ee sharciga ah raacnaa ,waxuu u mahadnaqay qareenka qoyska iyo dadkii Soomaaliyeed ee xanuunka la qaybsatay mudadii ay ku jireen xaalada Caruurtaan.
Previous articleTaajirkii ku eedeysnaa dilka xaaskiisa oo xabsiga laga sii daayay.
Next articleDr. Khalid(Legevaktlege): Coronavirus qofka maku dhici karaa mar 2-aad
Wuxuu qirtay inuu ka been-sheegay da´diisa iyo aqoonsigiisa: Wadanka ka bax!
Dowlada oo dajisay qorshaha ka hortaga muslim-naceybka.
Keydka NorSom Velg måned september 2020 (45) august 2020 (82) juli 2020 (54) juni 2020 (69) mai 2020 (83) april 2020 (68) mars 2020 (130) februar 2020 (69) januar 2020 (84) desember 2019 (22) november 2019 (71) oktober 2019 (54) september 2019 (50) august 2019 (96) juli 2019 (77) juni 2019 (78) mai 2019 (79) april 2019 (40) mars 2019 (64) februar 2019 (61) januar 2019 (40) desember 2018 (25) november 2018 (52) oktober 2018 (33) september 2018 (44) august 2018 (33) juli 2018 (28) juni 2018 (28) mai 2018 (39) april 2018 (41) mars 2018 (55) februar 2018 (36) januar 2018 (85) desember 2017 (83) november 2017 (105) oktober 2017 (119) september 2017 (112) august 2017 (110) juli 2017 (125) juni 2017 (115) mai 2017 (122) april 2017 (108) mars 2017 (137) februar 2017 (114) januar 2017 (106) desember 2016 (98) november 2016 (101) oktober 2016 (83) september 2016 (44) august 2016 (44) juli 2016 (28) juni 2016 (44) mai 2016 (24) april 2016 (25) mars 2016 (1)